फुटको संघारमा पुगेकै हो कांग्रेस ? – Satyapati
फुटको संघारमा पुगेकै हो कांग्रेस ?
राजनीतिक दलहरुको खुट्टा तान्ने क्रम कहिल्यै नरोकिने भयो । मुलुकले विकास होइन विनाश पायो ।
केही दिनपछि शेखर कोइराला र शेरबहादुर देउवाको पनि हानाथाप हुन्छ । मुखबाट गोलीको वर्षात हुन्छ । अब कांग्रेस पनि धेरै दिन टिक्दैन ।
पछिल्लो समय सिंहदरबारमा अधिकांश माननीय मन्त्रीज्युहरु भेटिदैनन् । आफ्नो काम लिएर गएका सर्वसाधारणलाई मन्त्री भेट्न हम्मेहम्मे परेको छ । मन्त्रीहरु छिनका लागि सिंहदरबार आउछन्, फेरि गायब । यता, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि तीन महिनादेखि सिंहदरबार गएका छैनन् । उनले मन्त्रीपरिषद्को बैठकसमेत प्रधानमन्त्री निवास, वालुवाटारबाट गर्दै आएको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री नै आउँदैनन् भने हामी किन जाने ? भन्ने मनशाय मन्त्रीहरुमा देखिएको छ । मन्त्रीहरु मन्त्रालय जान छोडिसकेका छन् । आएका पनि एकछिन बस्छन्, फेरि दौडिहाल्छन् । सिंहदरबारभित्र धेरै मन्त्रालय छन् तर अधिकांशमा मन्त्री बाहिर भनेर राखिएको हुन्छ । मन्त्रालयका कर्मचारीहरु भखरै हुनुहुन्थ्यो, बाहिर निस्किसक्नुभो भन्ने बहाना बनाउँछन् ।
यतिखेर मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई कसैको डरत्रास छैन् । अधिकांश कर्मचारीहरु सामाजिक सञ्जालमा झुण्डिएका हुन्छन् । कोही खाजाघर त कोही राजनीतिक गफगाफमा । ‘सरकारी काम, कहिले जाला घाम’ भनेको यही नै रहेछ । दिनभरि गफ गर्ने, महिनामा तलब थाप्ने । सरकारले विदेशी ऋण लिएर भए पनि यिनीहरुलाई तलब खुवाइरहेको छ । भटाभट विदेशी ऋण स्वीकृत गरेर सरकारी कर्मचारीलाई मासिक तलब दिनुपरेको छ । नेपालीको थाप्लोमा ऋण बढेको बढ्यै छ । यता, सरकारी कर्मचारीहरु मख्खै परेका छन् । बिनासित्ती तलब खान पाएपछि मख्ख नपर्ने कुरा पनि रहेन् नि । अहिले एउटा नेपालीको टाउकोमा ७० हजारभन्दा बढी विदेशी ऋण पुगिसकेको छ ।
ऋण दिने विदेशी छदैछन्, बोकिदिने नेपाली । अनि सरकारलाई के चाहियो । सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता र सेवासुविधा भए भइहाल्यो । विदेशी ऋण थपिएकै थपिएै भए पनि नेताहरु हामीलाई बालमतलब भन्ने खालका छन् । ऋण लियो बिचमै झ्याम्म हुन्छ । विकासको नाममा भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ । देशको प्रधानमन्त्री आफु त ठाउँमा बस्न सक्दैनन्, अरुलाई के ठाउँमा राख्लान् ? सिंहदरबार आएर जनताको काम गर्न छोडेर भोट माग्दै हिँड्ने पनि प्रधानमन्त्री हो ? प्रधानमन्त्री देउवालाई अहिले भरतपुर महानगरबाट मेयरमा उठेकी रेणु दाहालका लागि भोट माग्न भ्याइनभ्याइ छ । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्धारा आयोजित कार्यक्रममा पुगेर भोट माग्न माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आचारसंहिताले दिन्छ ?
वालुवाटारबाट सिंहदरबार आउन नसक्ने प्रधानमन्त्री देउवा भोट माग्न चितवनसम्म पुगेका छन् । पाँच चोटी प्रधानमन्त्री भएका देउवाले के गरे ? एउटा सिन्कोसम्म भाँच्न नसकेको प्रमाणहरु हाम्रै सामु छ । वडाध्यक्ष बन्न असमर्थ व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु नै नेपाल र नेपालीका निम्ति दुर्भाग्यको कुरा हो । अहिले बजारमा कांग्रेसकै कार्यकर्ताहरुले रोचक कुरा उठाएका छन् । कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापा माओवादीको कार्यकर्ता बनेको कुरामा बहस सुरु भएको छ । आफ्नो पार्टी छोडेर माओवादीका अध्यक्ष दाहालको सुपुत्रीलाई भोट माग्दै हिँडेपछि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो ।
२०७४ सालको चुनावमा पुष्पकमल दाहाल नेकपा एमालेसँग लहसिएका थिए । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माओवादी पार्टीलाई भोट दिनुस् भन्दै हिँडे । अहिले उनले कांग्रेस च्यापेका छन् । पहिले ओली अहिले देउवा । दाहालले आफु जित्नका लागि एक अर्कासँग टासिनेबाहेक केही गर्न सकेनन् । पहिले पहिले बुढापाखाले फटाहाको पछाडि लाग्नुहुदैन भनेर सम्झाउँथे । फटाहाको पछि लाग्यो भने सिधा मान्छे पनि फटाहा हुन्छन् । दाहाललाई अहिले सबैले फटाहाको संज्ञा दिएका छन् । त्यही दाहालको अघिपछि दुईवटा पार्टी लागिपरेको छ । काम गर्न नसक्दा माओवादी पार्टीले जनताबाट विश्वसनीयता गुमाइसकेको छ । त्यसैले माओवादी कहिले यता लहसिने कहिले उता टाँसिने गरिरहेको छ । काम नगरे पनि जसरी हुन्छ उसलाई पद चाहिएको छ ।
माओवादीबाट मुलुकले केही पनि हासिल गरेन् । आफ्नो छोरीलाई मेयर, बुहारीलाई मन्त्री र भाइलाई सांसद् । हिजो जनयुद्धमा लागेका कार्यकर्तालाई फर्केर पनि नहेर्ने व्यक्तिलाई जनताले भोट नै किन दिने ? टाँसिएकै भरमा सरकारमा बस्न पाइन्छ ? सरकार पाएन भने माओवादी बाँच्न सक्दैन । पानीबाट निकालेको माछाजस्तो भइहाल्छ । सरकारको प्यासी बन्नका लागि केही काम पनि गरेको हुनुपप्यो । माओवादी सरकारमा आउदा मुलुकले के उपलब्धि हासिल गर्यो ? जवाफ छ माओवादीसँग । देश र जनताको लागि के गर्न नसक्नेले सरकार चलाउने भोक राख्नु नै गलत हो । नाटकी भरमा कतिदिन चल्छ, पार्टी र सरकार ? हिजो पुष्पकमल दाहाल एमालेसंँ गएर मिल्दा एमाले चक्नाचुर भयो । त्यत्रो ठुलो पार्टी टुक्राटुक्रा भयो । आज माधव नेपाल र केपी ओली एकअर्काको मुख पनि हेर्न चाहदैनन् ।
अब कांग्रेसको दुर्दशा सुरु भएको छ । कांग्रेस पार्टी फुटेर टुक्राटुक्रा बन्न बेर लाग्दैन । एउटा चलेकै उखान ‘बाँदरले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन्, अरुलाई पनि बनाउन दिँदैन’ पुष्पकमल दाहालमा पनि यही उखान लागू भएको छ । अहिले केपीले माधव नेपाललाई सक्दो गाली गर्छन् । माधव नेपालले पनि केपीलाई देखिसक्दैन् । यसमा पुलको काम गर्ने श्रेय वरिष्ठ नेता दाहाललाई जान्छ । केही दिनपछि शेखर कोइराला र शेरबहादुर देउवाको पनि हानाथाप हुन्छ । मुखबाट गोलीको वर्षात हुन्छ । अब कांग्रेस पनि धेरै दिन टिक्दैन । हिजो पहिले पार्टी बनेको माओवादी यी दुई पार्टीका कारण फुटेको थियो । कांग्रेस र एमालेको कारण माओवादी छरपस्ट बन्यो । आफ्नो पार्टी फुटाएको कुराले अहिले पनि दाहालको मन पोलिरहेको छ । पार्टी नफुटेको भए माओवादी आज पनि पहिलो पार्टी नै हुन्थ्यो ।
आफ्नो पार्टी टुक्राटुक्रा बनाएर बदला दाहालले लिएको स्पष्ट बुझिन्छ । एमाले त फुटिसकेको छ, अब कांग्रेसको फुट्ने दिन आउँदैछ । ‘शत्रुलाई ढाल्नुपर्यो भने उहीसँगै मिल्नुपर्छ’ भनेर बुढापाखाले भनिरहन्थे । दाहालले पनि त्यही नै गरे । अब कांग्रेस फुटेर चार टुक्रा बन्ने देखिन्छ । एकातिर शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला । अर्कोतर गगन थापा र रामचन्द्र पौडेल । कांग्रेसको हाल एमालेको भन पनि बेहाल हुने बुझिन्छ । अरुलाई कमजोर बनाएर आफु सरकारमा आउने दाहालको योजना हो । दिमागी खेलमा दाहालसँग कसैले भ्याउदैनन् भनेर पुष्टाइ गरिरहन जरुरत छैन । कांग्रेस छियाछिया भयो भन्ने खबर नेपाली जनताको कानमा छिट्टै नै पर्नेछ ।
कांग्रेसको सभापतिले नै यो घोषणा गर्नेछन् । सँगसँगै हिँडेको केपी र माधवबीच आगो लगाउने दाहाल नै हुन् । दाहालको पछि लागेर माधवले एमालेलाई कुहिएको फर्सीसमेत भने । हिजो एमालेबाटै माधव नेपालले प्रधानमन्त्री पाएको होइनन् ? लामो समय एमालेमा जिम्मेवारी वहन गर्ने पनि उनी नै थिए । तर, पछिल्लो घडीमा एमालेलाई नै तँछाडमँछाड गर्न उनी पछि हटेनन् । कांग्रेस र एमालेलाई सिध्याएपछि आफ्नो छुटिएको पार्टी जोड्ने तयारीमा दाहाल छन् । राजनीतिक दलहरु एक–अर्काको खुट्टा तान्ने क्रम कहिल्यै नरोकिने भयो । मुलुकले विकास होइन विनाश पायो । असक्षम नेताहरुका कारण नेपाल नै नरहने स्थितिमा आइपुगिसकेको छ । राजनीतिक दलहरु छाडा हुँदा मुलुकमा ठूलो क्षति हुँदोरहेछ भन्ने सिकाई नेपालले अरुलाई दियो ।
महंगी दिनहुँ बढेको बढ्यै गर्छ । तैपनि सरकार अनुगमन गर्दैन । बजारमा आर्थिक तरलताको खाडल झनै बढिरहेको छ । रोजगारीको अवसर नहुँदा बेरोजगारी बढ्दो छ । व्यापार व्यवसाय गर्छु भन्दा पनि कर्जा पाइँदैन । बिहान बेलुका छाक टार्न नेपाली जनतालाई निकै सकस परिसकेको छ । जनताको सरकारमाथिको विश्वास गुमाइसकेको छ । सरकार नै जिम्मेवार नभएपछि जनता जिम्मेवार बन्लान् ? स्थानीय तहको चनाव ढोकैमा आइसकेको छ । चुनावपछि मुलुक कतातिर मोडिन्छ ? भनेर धेरै चिन्तित बनिसकेका छन् । चुनावपछि महँगीले सीमा नाघ्ने अड्कलबाजी सुरु भइसकेको छ । खर्च झनै पनि बढ्छ । अब सरकारले कसरी खर्च धान्ने ? विदेशी ऋण त सधैं पाइँदैन होला ? आर्थिक तरलताको दलदलमा मुलुक फस्दै जान्छ । नेताहरु असक्षम हुँदा जनताले धेरै दुःख पाए ।
प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाले भनेको एउटा वक्तव्यले सबैतिरको माहौल ततायो । कांग्रेस पार्टीलाई भोट नदिए बजेट सबै कटौती गर्छु भनेर उनले भनिन् । आरजु राणाको व्यक्तिगत सम्पत्ति हो र बजेट कटौती गर्नलाई ? उनले आफ्नो घरखेत बेचेर विकास गर्ने हो र ? यस्ता व्यक्तिले के राजनीति गर्छन् ? देशको के विकास होला ? प्रधानमन्त्री पत्नी भएर बजेट कटौती गर्छु भन्न नैतिकताले दिन्छ ? अब पनि नसुध्रिने हो भने यिनीहरुलाई नेपाली जनताले सजाय दिनेछन् । यस्तै, पारा हो भने नेपाली जनताले नै यिनीहरुलाई लखेट्छन् । कि त जेलको हावा खान तयार हुनुपर्यो । भ्रष्टाचार गरेर जोडेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरौं, जनता र मुलुकपट्टी जिम्मेवार बनौं ।
दशगजाका ‘जंगे पिलर’ : ‘केही हराए, केही जीर्ण, केही नष्ट’
नेपाली खानालाई विश्वसामु परिचित गराउँदै सन्तोष बने बिबिसी मास्टर सेफको उपविजेता
संघर्षशील एक महिला पत्रकारका दुई भारी, ‘अगाडि क्यामरा पछाडि छोरी’
‘जनताका अपेक्षा पुरा गर्न व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्छ’